'Ọ dịghị ihe ngosi' Onyinye Wedding - Best Ideas | Bezzia
Onyinye agbamakwụkwọ 'enweghị ndị bịara': echiche kacha mma
Susana godoy | 16/06/2022 16:00 | Agbamakwụkwọ
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche inye onyinye agbamakwụkwọ 'enweghị ihe ngosi' n'ihi na ị gaghị enwe ike ịga, mgbe ahụ anyị na-ahapụ gị usoro echiche zuru oke.. Ọ bụrụ na n'onwe ya mgbe ụfọdụ, ọ bụ ntakịrị isi ọwụwa iche echiche banyere ihe ị ga-enye ma ọ bụrụ na anyị aga agbamakwụkwọ, n'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-ewetakwa anyị ụwa nke obi abụọ. N'ezie, anyị ahọrọla nhọrọ zuru oke.
Ihe niile ga-adabere ma ị maara ọtụtụ ihe ma ọ bụ ntakịrị banyere ụtọ di na nwunye ahụ. N'ihi na ọ na-adị mma mgbe niile ịgbatu ụzọ dị otú ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ naghị eme gị, echegbula onwe gị n'ihi na enwere echiche ịhọrọ. Kedu ihe m ga-enye ma ọ bụrụ na agaghị m aga agbamakwụkwọ? Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị a kacha anụ ma taa ị ga-enwe azịza dị iche iche nye ya.
1 Onyinye agbamakwụkwọ 'enweghị ndị bịara': igbe ahụmahụ
2 Kwụọ maka ụfọdụ ihe dị mkpa gị
3 Otu ngwugwu karama ahaziri ahazi
4 Ihe ijuanya nke nri ụtụtụ n'ụlọ
5 Nkọwa ịchọ mma
Onyinye agbamakwụkwọ 'enweghị ndị bịara': igbe ahụmahụ
Chọpụta ị maraworị igbe ndị ahụ bụ otu na ịla n'iyi na ahụmahụ pụrụ iche. N'otu aka ahụ e nwere ebe ị nwere ike họrọ otu abalị ma ọ bụ abụọ, yana nri ụtụtụ ma ọ bụ ọbụna ọkara osisi. Tụkwasị na nke ahụ, ebe ndị a na-aga nwere ike ịdị iche iche na n'oge a ọ ga-abụ di na nwunye ikpebi ebe. Na mgbakwunye na abalị nkwari akụ, enwekwara ahụmịhe spa, yana ọgwụgwọ gụnyere ma ọ bụ ike ịnụ ụtọ usoro nri yana ọbụlagodi nleta nwere ọtụtụ isiokwu. Enwere echiche na-adịghị agwụ agwụ, n'ihi ya, ị ga-ahọrọ otu nke dabara ntakịrị na mmasị nke nwanyị na-alụ ọhụrụ. Ka i wee nwee ike ịhazigharị ego ị ga-etinye, chee echiche banyere ọkara nke ị ga-enye ma ọ bụrụ na ị gaa agbamakwụkwọ ahụ. Ọ bụ inye gị echiche!
Kwụọ maka ụfọdụ ihe dị mkpa gị
Mgbe ọbụbụenyi bụ isi ihe na-amasị gị, ị na-achọkarị ka ha cheta gị n'ụbọchị ahụ pụrụ iche. Ya kpatara, ị nwere ike ịkwụ ọkara nke ụfọdụ ihe ndị nwunye ma ọ bụ nwunye ga-azụrụ. Dịka ọmụmaatụ, njikọ aka, bouquet ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ọ bụ ụzọ isi tinye ego ị ga-enye ha ma ọ bụ nke ikekwe ị ga-eji zụta nkọwa ọzọ nke na-adịghị ha mkpa nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ibute ụzọ n'ime anyị, n'ezie site n'ikwu ya, ha ga-enwe ike ịghọta ya.
Otu ngwugwu karama ahaziri ahazi
Chọpụta na mgbe agbamakwụkwọ, na ozugbo ha rutere site na honiimuunu, ha ga-akpọ gị n'ụlọ na-echeta na nnukwu ụbọchị. Yabụ, ọ nweghị ihe dị mma karịa inye ha mkpọ mmanya ma ọ bụ cava ahaziri iche. Enwere ndị na-ewetakwa ihe ọṅụṅụ di na nwunye na n'ezie ọ nwere ike ịbụ nkọwa zuru oke. Ọbụna iko ndị a nwere ike ịkanye na ihe mmado mara mma nwere ihe oyiyi nke agbamakwụkwọ ahụ nwere ike itinye na karama. Taa enwere ọtụtụ weebụsaịtị na-elekọta ya. Ya mere, site na mmemme dị mfe ị nwere ike ime ya n'enweghị nnukwu nsogbu.
Ihe ijuanya nke nri ụtụtụ n'ụlọ
Ikekwe ọ bụghị onyinye dị otú ahụ, ma ọ bụ ihe ịtụnanya mara mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe anyị na-ekwu maka onyinye agbamakwụkwọ 'anaghị abịa', enwere ike inye ya maka ihe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ n'ihi na anyị enweghị ike ịga n'ihi nkwenye ụfọdụ, n'ọtụtụ ndị ọzọ n'ihi nsogbu akụ na ụba. Ya mere, onye ọ bụla ga-emezigharị na mmefu ego ya. N'ihi ya iju ha anya site n'ịnye otu n'ime nri ụtụtụ ndị ahụ ahaziri ahazi nke ha ga-alọta n'amaghị di na nwunye ahụ, ọ bụ ihe ngosi mara mma nke ga-eme ka ha nwee obi ụtọ..
Nkọwa ịchọ mma
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịdaba n'echiche ndị kacha ochie, mana anyị ekwesịghị ịhapụ ha iche maka nke ahụ. Ma ị na-achọ ụlọ gị mma ma ọ bụ na ị naghị achọ, nkọwa ihe ịchọ mma nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma mgbe niile. Ụfọdụ eserese ma ọ bụ elekere mgbidi, yana obere oriọna maka tebụl n'akụkụ akwa. Uwe mkpuchi maka mpaghara ọnụ ụzọ bụkwa nhọrọ bara uru na n'ezie, trays ka ha nwee ike iri nri ụtụtụ n'ụra. Kedu ihe ị na-enyekarị mgbe ị na-agaghị agbamakwụkwọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Agbamakwụkwọ » Onyinye agbamakwụkwọ 'enweghị ndị bịara': echiche kacha mma
Echiche iji jikọta ngwá ụlọ ochie na nke oge a